राप्रपामा अन्योल : तयारीमा चुनाव कि महाधिवेशन ? (भिडियो) « Image Khabar
राप्रपामा अन्योल : तयारीमा चुनाव कि महाधिवेशन ? (भिडियो)
२७ पुष २०७७, सोमबार १७:३१
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) को आगामी वैशाख २८ मा हुने भनिएको एकता महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेको छ । वैशाखका लागि घोषणा भएको मध्यावधि निर्वाचनका कारण राप्रपाको प्राथामिकता परिवर्तन भएको छ । निर्वाचनलाई शक्ति पुनःस्थापनाको सेतु बनाउने तयारीमा लाग्दा पार्टीभित्र महाधिवेशनको विषय सेलाएको छ ।
कार्यतालिकाअनुसार काम हुने हो भने राप्रपालाई एकता महाधिवेशन गर्न करिव पाँच महिना बाँकी छ । तर, पार्टी मध्यावधि चुनावको तयारीमा जुटेसँगै तोकिएको समयमा महाधिवेशन लगभग अनिश्चित छ । सक्रिय सदस्यता वितरण फागुन दोस्रो साता वितरण सम्पन्न हुनेमा पार्टीका नेताहरु नै ढुक्क छैनन् ।
३ लाख सक्रिय सदस्य पु¥याएर महाधिवेशन गराउने पार्टीको योजना छ । यता, सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले पनि महाधिवेशनको अन्योल झनै बढाएको छ । संसद पुनःस्थापना भए महाधिवेशन गर्ने, त्यसो हुन नसके निर्वाचनमा जुट्ने राप्रपाको योजना छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बन्न मध्यावधि निर्वाचन कोसेढुङ्गा हुने बताउनुभएको थियो । उहाँको यो भनाइले नै पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बुझ्न सकिन्छ । चुनाव हुने अवस्था आए महाधिवेशनलाई पर धकेलेर राप्रपाले पार्टीको जनतामाझ घुमिल भएको छवि सुधार गर्न मेहनत पक्कै गर्नेछ ।
पार्टीको पुस ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म पार्टी समायोजनले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
जुट्ने फुट्ने, फेरी जुट्ने अनि फुट्ने, पूर्वपञ्चहरूको ट्याग पाएको राप्रपालाइ नौलो विषय होइन । वैचारिक विचलन र स्वार्थगत ध्रुवीकरण यो पार्टीको मुख्य समस्या हो । हिन्दुराज्य तथा राजसंस्थासहितको वैकल्पिक शक्ति बन्ने विचारमा एकमत भएर गत फागुनमा एकजुट भएको पार्टी फेरि दुर्घटना उन्मुख नहुने हो भने समयमै महाधिवेशन गरेर जनतामाझ जानु उत्तम हुनसक्छ । क्यामरा– भरत केसी
सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक समितिको बैठक आज पनि बस्दै, स्थानीय र संसदीय चुनावबारे छलफल हुने
मन्त्रीहरूको हुकुमी र सन्की कार्यशैली : प्रधानमन्त्रीज्यू, लगाम लगाउने कि स्वामित्व लिने ?
दलहरूमा कोरोनाको असर : मतदाता रिझाउने समयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा
विकासमा अवरोध नगर्न सत्ता गठबन्धनलाई उपाध्यक्ष पौडेलको आग्रह
सर्लाहीमा आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक वृद्धाको मृत्यु
सर्लाही । सर्लाहीको गोडैतामा आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । चिसोबाट बच्न आगो तापिरहेको अवस्थामा सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–११ की ७५ वर्षीया
चिनियाँ भेरोसेल खोपको अभाव, पहिलो र बुस्टर डोज रोक्न सरकारको उर्दी
काठमाडौं । ४० लाख डोज खोप हराएको खबर सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले चिनियाँ भेरोसेल खोप अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले भेरोसेल
भारतले रोक्यो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाहक उडान, कार्गो उडान भने जारी रहने
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीब्र बनेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाहक हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । भारतको नागरिक उड्ड्ययन महानिर्देशनालय (डीजीसीए) ले आगामी फेब्रुअरी २८